လုပ်သား ၃ဝဝ ကျော် ဆန္ဒပြနေသည့် အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ် စက်ရုံ ပြဿနာညှိနှိုင်းရေးအပိုင်း လယ်ဆည်ဝ?? - Yangon Media Group
လုပ်သား ၃ဝဝ ကျော် ဆန္ဒပြနေသည့် အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ် စက်ရုံ ပြဿနာညှိနှိုင်းရေးအပိုင်း လယ်ဆည်ဝ??
”အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းမှုက လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ လယ်ဆည်ကိုလည်း တင်ပြထားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဘယ် တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်တော့ ပြောလို့မရသေးဘူး။ လယ်ဆည်ဘက်က အကြောင်းပြန်ကြားတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ပြီးတော့အလုပ်သ မားတွေကတော့ ဒီစက်ရုံကြီးမှာလုပ်တာလည်း ကြာလာပြီဆိုတော့ သံယောဇဉ်ရှိလို့ အခုလိုလုပ်တာ ဖြစ်မှာပါ”ဟု ကျော်ထက်ကျော် ဂုန်နီအိတ်စက်ရုံ၏ စက်ရုံမှူး ဦးမျိုးတင့်က ပြောသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့်လည်း စက်ရုံပိတ်သိမ်းသော်လည်း စက်ရုံအတွင်းရှိနေထိုင်သည့် အလုပ်သမား မိသားစုများကိုချက်ချင်းဖယ်ရှား သွားမည်မဟုတ်ဘဲ အချိန်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်အချိန်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းပိတ်သိမ်း စက်ရုံနေရာတွင် ဘက်စုံစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် MIC သို့ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံထားကြောင်း MIC ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက လုပ် ငန်းများဆက် လက်လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများဖြစ်မည်ကိုမူ မပြောနိုင် သေးကြောင်း ကျော်ထက်ကျော် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တို့ က ဆိုသည်။
ကျော်ထက်ကျော်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာဦးလှသိန်းက ”စတင်လွှဲပြောင်းရ ယူချိန်ကနေ တစ်နှစ်ကို ကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝ ကနေ ၇ဝဝဝ အထိ ပျမ်းမျှ ရှုံးနေတယ်။ အဲ့ဒီလောက်ထိအရှုံး ကို ဘယ်လိုတောင့်ခံခဲ့သလဲဆိုတာ ကတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါက ကုမ္ပဏီတွင်း ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရှုံးလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်ဘာသာပေါင်းကြည့်ကြပါ”ဟု ကုမ္ပဏီနစ်နာမူအပိုင်းများကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
မီးခိုးငွေ့ကြောင့် ဆေးရုံရောက်ရှိ လူနာ ၂၇ ဦး ရှိခဲ့သည့်အနက် ၁၃ ဦး ပြန်ဆင်း၊ မီးငြှိမ်းသတ??